Tag: vhidhiyo kubatanidzwa | Martech Zone
Tag: vhidhiyo kubatanidzwa
Vhidhiyo Kushambadzira Kunoshanda
Chipiri, Zvita 31, 2013 Chipiri, Zvita 31, 2013 Douglas Karr
Wese munhu ari kugadzira fungidziro yavo yekupera kwegore. Ini ndinofunga unogona kumbomira hoopla yese uye nekushandira yako yekushambadzira zano gore rinouya rinoenderana nezvose chokwadi. Multi-chiteshi nzira, kushambadzira otomatiki, nhare uye vhidhiyo zvichaenderera mberi kutyaira kubatikana uye traffic kune rako bhizinesi. Heano akakura infographic ane anoshamisa matanho anotsigira chako kudiwa kuti uite yepamutemo vhidhiyo yekushambadzira zano mu2014. Delos Incorporate inogovera aya Vhidhiyo Ekushambadzira Matipi: Ronga -
Matanho Anooneka: Mavhidhiyo uye Akawana Midhiya
Chitatu, September 25, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Matanho Anooneka anopa vamiririri uye makuru mabhureki nemukana wekugovera zvinyorwa zvavo kune vanoona. Chikuva chavo chinosvika pamusoro pevane mamirioni mazana matatu nemakumi masere vanoona vhidhiyo mwedzi wega wega. Parizvino, ivo vayera 380 trillion mavhidhiyo ekuona, anopfuura mamirioni mazana mashanu mavhidhiyo, uye anopfuura zviuru gumi zvemashambadziro ekushambadzira. Matanho Anooneka anounza chaiyo sarudzo-yakavakirwa vhidhiyo kushambadzira kumunhu chaiye panguva yakakodzera pamuparidzi chaiye, kubatsira vashambadziri vemakambani kurwisa kupatsanurwa kwemidhiya vachigadzirisa
Kushambadzira Kubata: Kunakidzwa neVhidhiyo
Muvhuro, Kukadzi 2, 2009 Chipiri, Gunyana 6, 2020 Douglas Karr
Kuvaka chikuva chemabhizimusi kublogi pairi kungobudirira chete kana ivo vatengi vachiwedzera chikuva. Isu tinoziva vatengi vedu vaizobudirira mukuwana kudzoka kune investment kana tikangoita kuti vagadzire uye vagovana zvimwe zvinyorwa nezve zvigadzirwa zvavo nemasevhisi. Kushandiswa kwepuratifomu kunoda kuti software sekambani yebasa ive nezano rekuona mashandisirwo. Kubva pane boardboard kuburikidza nekuongorora mashandisirwo, chikuva chinofanirwa kunge chiri kutarisa